बेहोस नगराई गरियो मस्तिष्क शल्यक्रिया, फेसुबकमा प्रत्यक्ष प्रसारण - HealthyKhabar
एजेन्सी- मस्तिष्कको सर्जरी संवेदनशील विषय हो। त्यसमाथि पनि यस्तो शल्यक्रिया सचेत अवस्थामामै गरिए कस्तो अनुभव छ होला? यतिमात्र होइन, सचेत अवस्थामा गरिएको मस्तिष्कोको शल्यक्रियाको फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहे कस्तो अनुभव होला? जो कोहीलाई यस्तो कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।
ठीक यस्तै अनुभव गरेकी छन् २५ वर्षीया जेन्ना सार्टले। उनको मस्तिष्क शल्यक्रियाको प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकमा गरिएको छ। डल्लासको मेथोडिस्ट मेडिकल सेन्टरमा गरिएको शल्यक्रियामा उनको मस्तिष्कमा रक्तनली गुजल्टिएको थियो। यसले गर्दा उनको बोल्ने शक्तिमा असर पार्नुका साथै छारे रोगसमेत भएको थियो। अमेरिकाको जर्जियास्थित ब्रेन्यु युनिभर्सिटिबाट अकुपेसनल थेरापीमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले पुर्नस्थापना अस्पतालमा स्ट्रोकका बिरामीलाई मद्दत गर्थिन्। त्यतिबेलादेखि नै उनलाई पनि स्ट्रोकका लक्षण देखा पर्न थालेका थिए।
उनको शल्यक्रिया सुरु गर्नुअघि सार्टलाई डाक्टरहरुले एनेस्थेसियामा राखेका थिए। जब डाक्टरहरु मस्तिष्कमा पुगे, सार्टलाई सचेत अवस्थामा ल्याइयो। उनी बोल्न सक्थिन्, सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन्थिन्, आफ्नो मस्तिष्कमा के भइरहेको अनुभव गर्न सक्थिन्। शल्यक्रियाको दौरान सार्टलाई आइप्याड देखाइएको थियो। आइप्याडमा उनले विभिन्न नम्बर, रङ, जनावर र अरु विभिन्न चित्रहरु देखाइयो जसलाई उनले सजिलै पहिचान गरिन्। भिडियोमा ४५ मिनेटको शल्यक्रियामा सार्ट शान्त थिइन्। बेलाबेलामा उनलाई मुस्कुराइरहेको पनि देख्न सकिन्थ्यो। उनले अरु सर्जनसँग गफ गरिरहेकी थिइन्। शल्यक्रियापछि सार्टलाई आइसियूमा लगियो।
सार्टकी आमा वेन्डीले छोरी खुशी नै रहेको बताएकी छन्। ‘उनी अहिले खुसी छन्, राम्रो महसुस गरेकी छिन्,’ उनले भनिन्। सार्टलाई उद्धृत गर्दै उनकी आमाले भनिन्, ‘म थाके पनि मष्तिष्क सर्जरी भएजस्तो मलाई महसुस भएको छैन।’
अस्पतालका प्रमुख न्युरोसर्जन डा निमेष पटेलले भने, ‘मस्तिष्कमा जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टम पहिला नै राखिसकेका थियौँ। मस्तिष्कको कुन भाग छोड्ने र कुन भागमा जाने भनेर निर्क्यौल गर्न त्यो सिस्टमले सहयोग गर्दथ्यो। शल्यक्रियाका बेला सानो गल्तीले उनको बोल्ने शक्तिमा प्रभाव पार्न पनि सक्थ्यो। त्यसमा हामी सचेत थियौं।’
सार्टको मस्तिष्कमा गरिएको शल्यक्रियाको फेसबुक लाइभ हजारौँले हेरेका छन्। सार्टले आफ्नो शल्यक्रियाको प्रत्यक्ष प्रसारणले आफूजस्तै बिरामीलाई यस्तो शल्यक्रिया गर्न बल मिल्ने हुने बताएकी छिन्। शल्यक्रियाको केही घण्टापछि अस्पतालले सार्टको अवस्था राम्रो भएको बताएको छ। डाक्टरहरुका लागि सचेत अवस्थामा गरिने शल्यक्रिया हाल सामान्य प्रक्रियाजस्तै भइसकेको छ। रोचेस्टर युनिभर्सिटीमा एक बिरामीको मस्तिष्कको शल्यक्रियामा सेक्सोफोन बजाइएको थियो। सन् २०१८ मा पनि टेक्सासकी एक महिलाको स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया पनि फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। रोगप्रति सेचतना बढोस् भनेर शल्यक्रियाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको महिलाको भनाइ थियो।